Uyilo lweZen Touch 2 ene-Android | I-Androidsis
UAlfonso de Frutos | | Ezinye izixhobo
Ukuba kukho into ecace gca, kukuba iApple ngoku ilawula intengiso yomculo ophathwayo kunye nevidiyo, enkosi usomandla iPod Touch. Isamsung yazama ukuhlasela eli candelo linamanzi kunye nayo Isamsung Samsung Player 50, ibimnyumbaza uApple nangona. Kutshanje sibhengeze i umdlali omtsha wesamsung enokushukumisa iziseko ezikhuselekileyo zika-Apple. Kwaye ngoku ishishini langaphambili elinzima lijoyina: Creative.
Ngokuka-Engadget, Ubugcisa bunedivayisi entsha ekulungeleyo, ebizwa ngokuba yi-Creative Zen Touch 2, Oko sele kudlula kuvavanyo lweFCC ukuyivula ngokukhawuleza kwimarike. Kwaye, ewe bafundi abathandekayo, iya kuza ne-Android.
Akukho datha ininzi kule nto yokudlala kodwa ubuncinci siyazi ngokuqinisekileyo ukuba Izakusebenza kwi-Android 2.1 kwaye iya kusebenza nescreen esine-intshi ezi-3.2. Iimpawu eziphambili zibandakanya: ithuba lokudibanisa ngeBluetooth kunye neWifi, ukongeza ekubeni kuluhlu lweTouch 2 lomdlali onalo IGPS. Okokugqibela, kubonakala ngathi inguqulelo ye-200-gigabyte iya kumaxabiso nge-euro ezingama-2 kunye nohlobo lwe-215-gigabyte 16.
Kum, okokuqala ukuba ixabiso alidibanisi kum. Akukho mntu uya kuhlawula i-euro ezingama-15 ngaphantsi kokulahlekelwa yi-14 yeebhiliyoni. Kwaye kwelinye icala Ndibona impazamo kusetyenziswa i-Android 2.1, xa iFroyo sele ikho.
Ndinguye ngokobuqu, okanye manditsho de kwaqala ukubakho kweselfowuni kunye nomdlali womculo odibeneyo odibeneyo, fan wenene wolu hlobo. Okoko sithandwa sam uWalkman waphelelwa lixesha Ndihlala ndithenga abadlali beCreative, kwaye neziphumo ezilungileyo kakhulu. Kodwa, ngaphandle kokuba iinkcukacha ezininzi zilahlekile kwaye i-Android inokuhlaziywa, ndicinga ukuba uBuchule buza kwenza okuncinci ngalo mdlali, ngakumbi xa kuthathelwa ingqalelo umdlali omtsha oza kukhupha i-Samsung kunye ne-iPod Touch. Ndiyathemba ukuba ndiyaphazama kuba ndinothando oluninzi ngale brand.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » UZen Touch 2, umdlali omtsha woBuchule
Uyilo luhle kakhulu, akunakwenzeka ukuba uthathe umhlaba kwi-ipod touch.
Juan José sitsho
Awuyithengi, ndinayo, ukudana okupheleleyo, ayihambelani nemarike, isidlali somsindo siyothusa, kwaye ngaphezulu kwako konke ayihambelani neenkumbulo ze-kingston, ndiyithengile kwaye kufuneka ndiyitye kunye neetapile. Manene endiyileleyo Bathe ndizokuthenga enye ... .. ububhanxa
Phendula uJuan José
Ndimele ukuthi nam ndiwele esilingweni ndathenga enye ye-8 GB. Izinto zazibonakala zintle kakhulu. Ngaphandle kokungena kwezinye iinkcukacha ndiza kuchaza kuphela kwaye ndityebe kakhulu ukuba andikaboni mntu uphawula. Kwisikhundla se-8 GB sinokuba ne-4,1 GB !!!!!
INCREDIBLE, ungayifaka njani inkqubo yokusebenza ehlala i-50% yediski iyonke.
zeziphi iitapile endizithengileyo. Ndiza kuqhubeka nokusebenzisa i-8 GB ZEN quequeño yam ene-7,46 ekhoyo. ngokubhekisele-
4,1 yeefayile ezifakwe kwi-pc yakho, kunye ne-3,5 yezicelo ze-android
enkosi Ingo. Ndingazikhuphela phi ezi zicelo, ukuba kukho izinto ezinomdla?
Ah !! Ndongeza ezinye izinto: i-justito reproductions, ivolumu ephantsi kakhulu, ii-headphone ezibonelela ezo zintsha zifana neplagi ecaphukisa iindlebe into embi. Ndithengile amaqhosha avakala kamnandi kwii-euro ezingama-15.
Ndinayo endiyithengileyo iiveki ezimbalwa, isismema sayifaka kwaye yafumana kuphela i-3 mb. kwaye umdlali uvakala ngetapile yevolumu elungileyo ... .. kufuneka bazi indlela yokusebenzisa ithuba lokuthintela i-zen touch 2 kunye nohlaziyo oluninzi abanokulwenza ukuze lubengcono kuphela kuya kufuneka uyazi ukukhangela
UDiego Alexander DarkLion sitsho
Molo, ndathenga enye kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo, uyazi ukuba ungayifaka kuWhatsApp kuyo?
Phendula u-Diego Alexander DarkLion
Le modeli inonomathotholo? Ndiyithengile nje
Ngaba unomqhubi ofana neemodeli zangaphambili?
UGonzalo ravina sitsho
Andikhumbuli ikhowudi yokuvula endiyenzayo
Phendula kuGonzalo Ravina
I-Tupaco sesona sicelo sesezona zilungileyo kwifowuni yakho ye-Android
I-ComiXology, ii-comics kwi-Android yakho